Taratasy misokatra ho an'ireo izay tsy manana ambasitra, tsy misy tanjona, ary tsy misy nofy - Blog
Azoko. Azoko ny fahatsapana ny fahabangana, ny fahatsapana tsy misy dikany, eny fa na dia ny helo nomeko azy rehetra aza ary tsy nahomby.
Azoko ny tsy fahasambarana , ny famerenana ny tena, ny tahotra, ny fahasosorana, ny fisavoritahana ary ny mahatsikaiky marary izay fantatrao fa hahagaga anao raha toa ka misy dikany kely fotsiny izao tontolo izao.
Satria tsy ny tsy fanananao hetahetam-po, tanjona ary nofinofinao ireo nofinofy ireo dia tsy tafiditra tao anaty slot sy boaty misy ireo rafitra taloha sy ireo fiheverana mialoha.
Tsy mihevitra ny tenanao ho maverick amin'ny fomba rehetra akory ianao. Inona no karazana adala mpahay siansa mazoto mihevitra ny tenany ho maverick? Saingy, izao tontolo izao dia mametaka zavatra hadalana be dia be amin'ny faniriana, tanjona ary nofinofy.
Ianao dia tokony ho karazana-A go-getter fitaovana! Eo am-piasana, amin'ny fiakarana, tambajotram-pifandraisana, sampana ary fiankinan-doha sy fitadiavana tombony alohan'ny hanombohana ny fizarana lahateny milaza amin'ny hafa eo amin'ny sahaninao ny fomba ahafahan'izy ireo manaraka ny lalanao ihany koa.
ny fahitana maso lava amin'ny bandy iray
Ianao dia tokony hahatratra ny volana, haka azy, hivarotra kapaoty eo amboniny, avy eo mankany Venus ho an'ny trano sy tany manaraka.
Ahoana anefa raha te hiaina tsotra izao ny fanirianao? Ary raha velona aho, ny tiako holazaina traikefa isaky ny fotoana amin'ny alalàn'ny ao anatiny isaky ny fotoana, fa tsy amin'ny mason-tsivana ny tombontsoa ho avy.
Ny eritreritro dia efa naheno fiovaovan'ny lahateny 'Raha ny tenany ihany no ampiasainy dia mety ho kintana izy' lahateny fanahiana avy amin'ny fianakaviana sy ny namany, izay mihevitra fa ny vola sy ny halehibeny no tanjonao.
Ary satria tsy mitady ireo hivoaka ianao, dia mihodina amin'ny lalan-kaleha tsy fahombiazan'ny ho avy, eny?
Henoy aho izao ary henoy aho avy eo: raha mahay miaina tsy misy enta-mavesatra ara-bola na ara-pihetseham-po amin'ny hafa ianao dia efa manao zavatra mety. Hell, izay isaina ho fandresena lehibe eo amin'izao tontolo izao izay toa mikasa ny hanao ny 99% amintsika ho vovoka azo ampiasaina.
Ety ivelany dia mety ho toa nilavo lefona ianao, fa ny ao anatiny kosa misy ady tanteraka. Ny hery ara-panahinao dia hahatonga an'i Legolas ho henatra amin'ny ady Helms Deep.
Ary aza manao zavatra toa mbola tsy hitanao ny Tompon'ny Peratra trilogy. Ny kabarin'i Samwise tamin'ilay Frodo nokapohina sy trotraka dia nahatonga anao handeha alina:
Toy ny ao amin'ireo tantara mahafinaritra Andriamatoa Frodo. Ireo izay tena zava-dehibe. Feno haizina sy loza izy ireo, ary indraindray tsy te hahalala ny farany ianao. Satria ahoana no hahasambatra ny farany? Ahoana no mety hiverenan'izao tontolo izao amin'ny fomba taloha raha ratsy be no nitranga?
Fa amin'ny farany, zavatra mandalo ihany io aloka io. Na ny maizina aza tsy maintsy mandalo. Ho avy ny andro vaovao. Ary rehefa hamirapiratra ny masoandro dia hamiratra hatrany hatrany izy.
Ireo no tantara nijanona taminao. Nisy dikany izany. Na dia kely loatra aza ianao ka tsy mahatakatra ny antony.
Saingy heveriko, Andriamatoa Frodo, azoko tsara izany. Fantatro izao. Folk ao anatin'ireny tantara ireny dia nanana vintana maro hiverina hody ihany raha tsy izy ireo. Satria izy ireo mihazona zavatra.
Ny toa tsy misy faniriana, tanjona na nofinofy ho an'ny tontolo ivelany dia ny ady hamafisina sy hifikirana amin'ny toerana misy anao ao.
Aza kivy àry.
Aza milavo lefona.
Ambition. Ny ambition dia tsy maintsy avy ao aminao. Tsy araraka aminao izany, tsy loholona hendry no mampianatra azy. Io ny valin'ny fanontaniana: Inona no ataonao amin'ny fiainana anio?
Y-O-U ihany no manao ny ezaka hametrahana ny valin'io fanontaniana io ety ivelany. Raha hadinonao vetivety izany ezaka izany dia avelao aho hanontany izao: Inona no tianao? Tsy ny zavatra tianao fotsiny, inona no tianao, vanim-potoana?
Satria na inona izany na inona, dia midika izany fa te hahita bebe kokoa an'izany ianao eto an-tany. Irinao ny olona hankafy azy io toa anao koa.
Na izany na tsy izany, ny zavatra ao anatinao dia tsy maintsy mampifandray amin'io fampitomboana io mba hivoahana amin'izao tontolo izao.
Ny cliché dia 'ny fizarana dia miahy,' fa ianao kosa dia mikarakara tsy mahatsiaro tena. Te hanome ny volana ny olona ianao, tsy ho an'ny condo, fa ho an'ny fitsangatsanganana tsara indrindra amin'ny fiainany.
ny fomba hiatrehana olona tsy manana saina
Ny faniriana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny te-hanolotra an'izao tontolo izao amin'ny hafa amin'ny endrika tsara kokoa noho ny mahita azy ny ankamaroany.
Hitanao ve izao fa ny fanirianao dia toa mahatalanjona toy izay azo atao? Ennui dia firehetam-po vetivety, izany filan'ny fanahy lalina izany dia tsy.
Ny ampahany sasany aminao dia te-hitondra izany fahagagana iraisana izany. Ahoana no anaovantsika izany? Fomba azo antoka: alao ilay fahatsapana fa ho tonga amin'ny adaptive sy mikoriana ianao drafitra asa .
Io tanjona io dia lasa tanjona.
Tratra ny tanjona. Aza avela hisy hilaza aminao fa tsy izy. Aza mividy amin'ny tabataban'ny fahasahiranana, fahadisoam-panantenana ary tsy fahombiazana.
Ny tabataba dia hypnotic dia mandreraka anao amin'ny fijanonana ary hampifantoka ny masonao. Ny tabataba dia fahasahiranana misakana, fahadisoam-panantenana, ary tsy fahombiazana, kanefa, tsy izany.
Tsy misy fomba ialana amin'ny fahasarotana, fahadisoam-panantenana ary tsy fahombiazana. Tsy misy mihazakazaka avy amin'izy ireo. Tsy ho an'iza. Tsy maninona na dia nahinjitra toy inona aza ianao, voafatotra mafy ny fatoranao kofehin-kiraronao, ary ny fahalalanao tsara ny tany dia handeha ianao.
Ka ahoana ny klika hafa? Mitsangana ve ianao?
Ary rehefa avy mifoha ianao, dia mandeha foana sa miovaova mankany amin'ny sisiny mba hahafahan'ny mpihazakazaka hafa mandalo?
Mahatsiaro ho adala ve ianao satria nieritreritra ny handositra?
Fisalasalana. Manana vitsivitsy isika rehetra. Betsaka. Hainao? Misalasala ny tenako aho izao. Tsy fantatro fa manana fitaovana aho, fantatro ny fomba, na ny fangorahan'ny foko hahatratra anao… fa tsy hijanona tsy manandrana aho. Tsy nilavo lefona aho tamin'ny fanandramana.
Miahiahy aho fa tsy ianao koa. Ny olona mijery anao dia mety mieritreritra hoe nilavo lefona ianao, saingy tsy hitany ny kodiarana mivadika arivo kilaometatra isa-minitra ao an-dohanao, manandrana mamoaka ny lalan-kivoahana amin'ny fanantenana ao ivelany.
Angamba hadinon'izy ireo ny maharary ny mianjera rehefa mihazakazaka, ary hadinony izany fanasitranana mila fotoana kely. Angamba mila fampahatsiahivana izy ireo fa tsy misy zavatra vita mandra-pahatapitry ny. Angamba mila klisezy mampihetsi-jato isan-karazany izy ireo hampiasaina toy ny kiho sy ny lohalika amin'ny manaraka.
toerana tsara aleha rehefa mankaleo
Mety hanao izany koa ianao.
Na angamba ianao te hieritreritra hoe iza ianao, aiza no tianao hisy, ary ahoana no ahatongavana any. Tsy azo atao ny manao na iray amin'ireo. Mieritreritra an'io ianao isan-kariva. Antsoina hoe manonofy. Rehefa miteny izy ireo hoe 'Nofinofy izahay,' dia ny fanaparitahana ny fiainantsika fotsiny amin'ny efijery lehibe kokoa.
Amin'ny ankapobeny: Iza no hahatongavanao, aiza no hisy anao, ary amin'ny mety ho fiverenanao rehetra, hihazona ny iray ve ianao ka hiteny hoe: 'Ity izao aho'?
Hobbit mipetraka eo amoron-dalana?
Heveriko fa tsia.
Tsy ianao izany.
Tsy rehefa fantatrao fa misy majia ao aminao.
lohahevitra folo voalohany horesahina
Tsy rehefa fantatrao fa mpiady ianao.
Tsy rehefa fantatrao fa manana ny fahafaha-mikatsaka zavatra zara raha nofinofisinao ianao.
Tsy rehefa fantatrao fa raha mahay mandry ianao, dia afaka mihazakazaka lavitra amin'izay noeritreretinao, ary raha marina ianao mahalala fa maharary, dia mandray ny hetsika ilaina mba hanasitranana.
Tsy nanome izany kabary izany tamin'i Samodo i Samwise satria liana liana amin'ny loza sy dia lavitra sy sarotra izy. Ny masony dia nibanjina ny tanjona taorian'ny loza: trano.
Ny 'tokantrano' dia aiza no hiandrasan'ny fahatsapanao ny mety sy ny zavaboarinao hipetraka sy hanonofy.
Ka ny fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao dia hoe, aiza ianao no mipetraka?
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny tsy fahampian'ny hetahetany, ny tanjonao na ny fitondrana fiara? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Karazana tanjona 10 hametrahana ny tenanao amin'ny fiainana (+ ohatra)
Raha matahotra ny hanaraka ny nofinao ianao dia vakio ity
Raha very ny Mojo anao, AZA manao ireo zavatra 11 ireo
Fomba marani-tsaina 5 hitantanana ny olona manambany ny safidinao amin'ny fiainanao
Ahoana no fomba hametrahana fikasana isan'andro hanatsarana ny fiainanao
tsy haiko hoe aiza aho
ahoana no hahafantaranao raha tianao izy
inona no nanjo an'i zac efron
zavatra tadiavinao amin'ny lehilahy
iza i Jason momoa nanambady